अष्ट्रेलिया पॉलिएस्टर र Vinyl पीवीसी पॉलिएस्टर सनस्क्रीन कपड़ा रोलर ब्लाइन्डका लागि
के अन्धोले अधिकांश व्यक्तिको आवश्यकताहरू पूरा गर्न सक्छ?
अधिकांश प्रयोगकर्ताहरूका लागि सूर्य नियन्त्रण उत्पादनहरू छनौट गर्नका लागि प्रकाश नियन्त्रण प्राथमिक प्राथमिक कारक हो। फिल्टर वा अवरुद्ध सूर्यको प्रकाश भिन्न स्पेसको आवश्यकता अनुसार।
राम्रोसँग इन्सुलेटेड शेड उत्पादनहरूले उर्जा खपतलाई कम गर्न सक्दछ किनभने प्रयोगकर्ताहरू कोठाको तापक्रम नियन्त्रण गर्न वातानुकूलित वा तताउने कुरामा भर पर्दैनन्। जाडोमा, तताउने लागतहरू 49%% सम्म बचत गर्न सकिन्छ। गर्मीमा, ref०% सम्म फ्रिज लागतहरू बचत गर्न सकिन्छ।
चीन रोलर शेड्स भेनिस भिजन कम्बी ब्लाइन्ड्स कम्पोनेन्ट भाग पर्दा समाप्त भयो
सनस्क्रीन ब्लाइन्ड शेड कपडाको लागि र Color्ग ज्ञान
पारिवारिक सजावटको लागि, त्यहाँ रंगमा यस्तो ज्ञान छ: यदि शयन कक्षको सजावटको रंग तातो छ भने, यो पति र पत्नीको भावनाको सद्भाव सुधार गर्न अनुकूल हुनेछ; यदि अध्ययन हल्का निलोले सजाइएको छ भने, यसले मानिसहरूलाई सिक्ने र अनुसन्धानमा ध्यान दिन सक्षम गर्दछ; रेस्टुरेन्टमा, रातो र खैरो भोजन तालिका भूख सुधार गर्न अनुकूल छ। त्यसोभए, र color मिलान धेरै महत्त्वपूर्ण छ। यसमा धेरै प्राथमिक स्कूल प्रश्नहरू छन्!
रोलर ब्लाइन्ड्स विन्डोज कम्पोनेन्टहरूको लागि चीन वाटरप्रूफ पर्दा सनस्क्रीन शेड कपडाहरू
विन्डो ब्लाइन्ड्स कपडा
मानव भौतिक जीवन र आध्यात्मिक जीवनको विकासको प्रक्रियामा, रोलर ब्लाइन्डहरूका लागि कपडाहरूको रंग सधैं जादुई आकर्षणको साथ चम्किन्छ। मानिसहरूले र only्गको र colorful्गीन संसारको अन्वेषण, अवलोकन, सिर्जना, र सराहना गर्दैन, तर समयको परिवर्तनहरू मार्फत अन्धाको झ्यालहरूको र colors्गको बुझ्ने र प्रयोगलाई अझ गहिराइमा राख्छ।
रोलर ब्लाइन्ड कम्पोनेन्ट कपडाहरूले रंगको राम्रो उपयोग गर्छन्। ठोस र colors्गहरूको वाटरप्रूफ रोलर ब्लाइन्डहरू, हेम्प, ग्रेडियन्ट, ज्याकवर्ड, र अन्य धेरै र colors्गहरूले चीनको छायाका कपडाहरूलाई समृद्ध बनाउँदछ।
विन्डो ब्लाइन्ड्स स्क्रिन सनस्क्रीन सूर्य सौर सेल फैब्रिक रोलर ब्लाइन्डका लागि
शटर विन्डो ब्लाइन्डहरू
प्रकृति यसको डिजाइनरको नामको योग्य छ। साधारण तीन प्राथमिक रंगको साथ, यसले हजारौं र colorsहरू सिर्जना गरेको छ, जस्तै वसन्तमा पहेंलो र हरियो, गर्मीमा रंगीन, शरदमा रातो म्यापल र जाडोमा चाँदी। प्रत्येक र colorको अद्वितीय आकर्षण छ। जब तिनीहरू एक अर्कासँग मिल्दछन्, दृश्य प्रभाव आधा प्रयासको साथ दोब्बर हुनेछ। विभिन्न प्रकारका सफ्ट कपडाहरूको शैलीको रंग मिलाउन सीपमा तपाईंले कत्तिको महारत हासिल गर्नुभयो? आज, ग्रुपिभ यसको बारेमा कुरा गर्न जाँदै छ!
खरानी मैनुअल बैठक कोठा 25mm Vinyl भेनिस कोरिया शटर विन्डो रोलर ब्लाइन्ड
आजकल मुख्य प्रकारको अन्धाको
सूर्य सुरक्षा र तातो इन्सुलेशनको लागि पर्दा पर्दा सामान्य रूपमा प्रयोग गरिएको परम्परागत विधि हो। त्यहाँ पर्दाका धेरै प्रकार छन्, र प्रत्येकसँग सूर्य प्रुफ र गर्मी इन्सुलेशनको मामलामा यसको आफ्नै फाइदा र हानिहरू छन्। सूर्य प्रुफ कोटिंग्स र सामग्रीहरूको साथ बाक्लो, गाढा पर्दा छनौट गर्नु उत्तम हो।
कपडा पर्दा। गाढा र गाढा र the्ग, राम्रो सेडि and र तातो इन्सुलेशन प्रभाव, जबकि शुद्ध कपास र सन सामग्री अधिक सास छ। तपाईं UV सुरक्षा संग सामग्री छनौट गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईं मूल पर्दा परिवर्तन गर्न चाहनुहुन्न भने, तपाईं फेब्रिक पर्दा र गोज पर्दाको बीच छायांकन कपडाको एक तह थप्न सक्नुहुन्छ।